नेपालको समय: ००:५८ | UK Time: 20:13
लन्डन । बेलायतमा सामान्यतया नेपाली समुदाय माझ हरेक साता जसो विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिन्छ । हरेक कार्यक्रमको आफ्नै उद्देश्य हुन्छ र सहभागिता पनि नेपालीकै बढी । तर, यसै साता रिचमिक्स् सिनेमामा आयोजना गरिएको एक च्यारिटी...
लन्डन । जमाना फेशनको छ । नेपालका तन्नेरीहरु समेत अब समयानुकुल फेशन स्टाइलमा बेखवर रहेनन् । फेशन डिजाइनिङमा डेढ दशक बढि समय बिताइसकेकी फेशन स्टाइलिष्ट एवं डिजाइनर निलिमा शर्माको लामो अनुभवले भन्छ, ‘नेपालमा पनि...
निर्मला राई ‘परिवेश’ले ल्याइन् ‘रोनासा’
काठमाडौं । बेलायतमा बस्दै आएकी खोटाङ, सुङ्देलकी कवि तथा गीतकार निर्मला राई ‘परिवेश’ले पछिल्लो गीति एल्बम ‘रोनासा’ बजारमा ल्याएकी छन् । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा परिवेशको दोस्रो एल्बम ‘रोनासा’को नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा-प्रष्तिष्ठानका...
काठमाण्डौं । नेपाली समाजमा विद्यमान धनी र गरिवबीचको विभेद चित्रित गर्ने एउटा पुरानो नाटक हालै काठमाण्डौं राष्टिय नाचघरमा मञ्चन गरिएको छ । माउण्ट फायर मिडिया प्रा. लि. को आयोजना र माउण्ट फायर थिएटर ग्रुपको...
अबुधावी । नाइँ, मलाई त्यही केटी चाहिन्छ.. भन्दै नेपाली संगीत क्षेत्रमा १५ वर्षअघि पाइला चालेका प्रकाश पौडेलले रोजगारीको क्रममा यूएईमा रहेर पनि संगीतलाई भुल्न सकेका छैनन् । रुन्चे गायकको रुपमा चिनिने प्रकाश विगत पाँच...
स्वीडेनमा ‘टलकजगं भर्सेस टुल्के’
काठमाडौं। स्वीडेन राजधानी स्टकहोल्ममा शनिवार (१० जनवरी २०१५) नेपाली चलचित्र “टलकजगं vs टुल्के” प्रदर्शन भएको छ । नेपाली भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको सम्वर्धन र प्रवर्धनका लागि गठन भएको नेपाली सांस्कृतिक संस्था, नेपाल मण्डपले...
लन्डन । भिन्न भिन्न हुन्छन् मानिसका सौख, जागिरको रोजाइ पनि फरक फरक । कोही टेवल वर्कमा आनन्द लिन्छन् । कसैलाई आकाशमा उड्न रहर लाग्छ भने कोही समुद्रमा तैरिन रमाउंछन् । यिनै मध्ये समुद्रमा दिनचर्या...
« अघिल्ला 1 … 23 24 25 26 27 28 पछिल्ला »